Phandeeyar STARTUP CHALLENGE 2017 [unicode]
သင့်မှာ စီးပွားရေး အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပစ္စပ္ပန်နဲ့ အနာဂါတ်ကို တိုးတက်စေမဲ့ နယ်ပယ်လေးခုဖြစ်တဲ့
Fintech ဆိုသည်မှာ ဘဏ္ဍာရေး ကဏ္ဍနှင့် ဆက်စပ်သော နည်းပညာ ကိုဆိုလိုသည်။ နည်းပညာအား သုံးသူ၍ ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍတွင် လူသားများပိုမိုပါဝင်နိုင်စေရန်လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း။ ဥပမာအားဖြင့် – မိုဘိုင်း(လ်)ဖုန်း သုံး၍ ငွေပေးချေမှုနိုင်သည့် ပလက်ဖောင်း။
Agtech ဆိုသည်မှာ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး ကဏ္ဍအား ပိုမိုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် နည်းပညာအား အသုံးပြုခြင်းကို ရည်ရွယ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး ကဏ္ဍအတွက် သတင်းအချက် အလက် နှင့် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများကို ထောက်ပံ့ပေးသည့် မိုဘိုင်း(လ်) application များ။ (ကြည့်ရန် – Shwe Thee Nhan App)
Internet of Things (iOT) သည် လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး နှင့် နည်းပညာ အစရှိသည့် နယ်ပါယ် အသီးသီးတွင် စတင်ဆွေးနွေးလာကြသည့် အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထုတ်ကုန် နှင့် အိမ်သုံးကုန်ပစ္စည်းများ၊ အိမ်စီးကား နှင့် ကုန်တင်ကား၊ စက်မှုလုပ်ငန်း၊ အာရုံခံပစ္စည်းများနှင့် အခြားသော နေ့စဉ်သုံး အရာဝတ္ထုများ အင်တာနက်ဖြင့် ချိတ်ဆက်၍ သီတင်းအချက်အလက်များကို ရယူကာ သုံးသပ်နိုင်သော အရည်အသွေးကို ပိုင်ဆိုင်လာကြသည်။ ၄င်းတို့သည် ကျွန်နု်ပ်တို့ နေ့စဉ်ဘဝ နေမှု ထိုင်မှု လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုတွေကို အသွင်းပြောင်းလဲပေးရန် ဦးတည်နေကြပြီ။ ဥပမာအားဖြင့် စက်ရုပ် သန့်ရှင်းရေးသမား
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြည်သူအများစု ဟာ Smartphones နဲ့ အင်တာနက်ကို အသုံးပြုလျက်ရှိပါတယ်။ အများစုဟာ နယ်ဒေသမှာ နေထိုက်လျက်ရှိပြီး အများစုဟာ မကြာသေးခင် အချိန်ကသာ အင်တာနက် အသုံးပြုခွင့်စတင် ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီအတွက် နယ်ဒေသမှာနေထိုက်နေတဲ့ နည်းပညာဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များကို အသုံးပြုခွင့်နဲနေသေးတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် လဲ နည်းပညာဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်တွေ ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ကလဲ အလွန်အရေးပါတယ်။ Tech For All Track ဟာ ထိုကဲ့သို့ ပြည်သူများအတွက် အရေးပါမဲ့ နည်းပညာဆိုင်ရာထုတ်ကုန်တွေ အတွက် ဦးတည်ပါတယ်။
Startup Challenge ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တစ်ခုတည်းဖြစ်တဲ့ ၉ရက်တာကြာမဲ့ စီးပွားရေးအကြံဉာဏ်များကိုအတွက် ပြိုင်ပွဲတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပြိုင်ပွဲအတွင်းမှာ ပါဝင်သူများအတွက် ကောင်းမွန်ဆန်းသစ်တဲ့ စီးပွားရေးအကြံဉာဏ် အဆင့်ကနေ ကောင်းမွန်တဲ Business Model တစ်ခုဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့အထိ လုပ်ဆောင်နိုင်အောင် ပံပိုးပေးမှာပါ။
Startup Challenge ကို Phandeeyar: Myanmar Innovation Lab (၁၁ထပ်၊ MAC Tower ၊ ကုန်သည်လမ်း) မှာ မေလ ၂၀ ကနေ မေလ ၂၈ နေ့အထိကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာပါ။
ဖန်တီးရာမှာ နယ်ပယ်အလိုက် ကျွမ်းကျင်တဲ့ ပညာရှင်များကနေ ပြိုင်ပွဲမစခင်နဲ့ ပြိုင်ပွဲကာလအတွင်း လာရောက်ပြီး အနီးကပ် သင်ကြားပြသပေးမှာဖြစ်လို့ ပါဝင်ဆင်နွဲသူများအနေနဲ့ ကိုယ်ရွေးချယ်တဲ့ နယ်ပယ်မှာ အတွေ့အကြုံရှိဖိုမလိုပါ။ ဒါ့အပြင့် နိုင်ငံတကာမှာ စီးပွားရေးတည်ဆောက်ရာမှာ အသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့ Business Model Canvas, Lean Methodology အစရှိတဲ့ tools တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အောင်မြင်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များက လာရောက် သင်ကြားပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ လျောက်ထားလိုပါက http://bit.ly/2nOEz8z မှာလျောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
Startup Challenge ဟာ စီးပွားရေးအကြံဉာဏ်ရှိသူတွေ၊ Startups တွေမှာ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်လိုတဲ့သူတွေအတွက် အထူးသင့်တော် ပြီး ကိုယ်တိုင် စီးပွားရေးကို လက်ရှိ လုပ်ကိုင်နေသူများအနေနဲ့လဲ မိမိ Business Model ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ကိုင်ဖို့ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါတယ်။
စွန့်ဦးတီထွင်သူ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဒီဇိုင်နာ၊ Develper၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ Marketer၊ Accountant၊ ကျောင်းသားဖြစ်ဖြစ် မည်သူမဆို Phandeeyar Startup Challenge 2017 မှာပါဝင်ဆင်နွဲဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
လျှောက်ထားပါ (သို့) စာရင်းပေးသွင်းပါ။
ပါဝင်ဆင်နွဲဖို့ http://bit.ly/2oh6D5x မှာလျောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ Startup Challenge အကြောင်းကို ပိုမို လေ့လာလိုပါက
Startup Challenge Info Hour (Thursday, 27 April 2017 @6PM)
ကိုတက်ရောက်ဖို့ http://bit.ly/2oh6D5x မှာ register လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Startup Challenge 2017: Fintech Ideation Session (Thursday: 04 May 2017 @6PM)
Startup Challenge 2017: Tech for All Ideation Session (Tuesday: 09 May 2017 @6PM)
Startup Challenge 2017: Agtech Ideation Session (Thursday: 11 May 2017 @6PM)
Startup Challenge 2017: iOT Ideation Session (Thursday: 18 May 2017 @6PM)
ဒီမှာ စာရင်းပေးသွင်းပါ။If you have any question regarding the Startup Challenge 2017, kindly find below for Frequently Asked Questions or contact Phandeeyar at 09 966 313 504 or email us at startupchallenge@phandeeyar.org.
Startup Challenge နဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းလိုသည်များရှိပါက အောက်ပါ FAQs များကိုဖတ်ရှုပြီးဖြစ်ဖြစ် ဖန်တီးရာကို 09 966 313 504 သို့မဟုတ် ကိုဆက်သွယ်ပြီးဖြစ်ဖြစ် startupchallenge@phandeeyar.org မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
မေးခွန်း – Startup Challenge ဆိုတာဘာလဲ?
အဖြေ – Business idea တစ်ခုကနေ အကောင်းဆုံး Business Model လုပ်ဆောင်ဖို့ တစ်ပတ်တာပြုလုပ်မယ့် ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သူတွေက idea တွေကနေ တစ်ကယ့်စီးပွားရေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အထိ အခြေအနေရအောင် အကောင်အထည်ဖေါ်နိုင်မလဲ ၊ ဥပမာ Prototype ၊ Marketing Channel ၊ Financial plan အပြင် ဖောက်သည်(Customer) အသစ်များရှာဖွေနိုင်မှု တို့ ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မေးခွန်း – Startup Challenge ကို ဘယ်လို လျောက်ထားရမလဲ?
အဖြေ – http://bit.ly/2np8nWs မှာ ဝင်ရောက်လျောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
မေးခွန်း – Startup Challenge အတွက် Application ကဘယ်အချိန်နောက်ဆုံးပါလဲ?
အဖြေ – မေလ ၁၇ မတိုင်မှီလျောက်ထားရမှာပါ။
မေးခွန်း – Startup Challenge 2017 ကိုဘယ်မှာ ကျင်းပမှာပါလဲ?
အဖြေ – Startup Challenge 2017 ကို Phandeeyar: Myanmar Innovation Lab, ၅၆၁ ကုန်သည်လမ်း, ၁၁ လွှာ မှာ ကျင်းပမှာပါ။
မေးခွန်း – Startup Challenge ကဘယ်လောက်ကြာမြင့်မှာပါလဲ?
အဖြေ – Startup Challenge ဟာ မေလ ၂၀ ရက်နေ့ကနေ မေလ ၂၈ ရက်အထိကျင်းပမှာဖြစ်လို့ ၉ရက်ကြာမြင့်မှာပါ။
မေးခွန်း – ဘယ်သူတွေ Startup Challenge ကိုဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သင့်ပါသလဲ?
အဖြေ – Fintech, Agtech, IoT or TechForAll အစရှိတဲ့နယ်ပယ်တွေမှာ စီးပွားရေးထူထောင်လိုသူ မည်သူမဆို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါတယ်။
မေးခွန်း – Startup Challenge အတွက် ပြိုင်ပွဲဝင်ကြေးပေးဖို့ လိုပါသလား?
အဖြေ – Startup Challenge ကို အခမဲ့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရမှာ ဖြစ်လို့ ပြိုင်ပွဲဝင်ကြေးပေးဖို့ မလိုပါ။
မေးခွန်း – Startup Challenge ကို လူဦးရည်ကန့်သက်ထားပါသလား?
အဖြေ – လူဦးရည် ကန့်သက်ထားခြင်းမရှိပါ။ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်က ပြိုင်ပွဲဝင် အယောက် ၂၀၀ ကျော်ပါ၀င်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။
မေးခွန်း – ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မဲ့ အသက်အရွယ်ကန့်သက်ထားပါသလာ?
အဖြေ – အသက်အရွယ် ကန့်သက်ထားခြင်းမရှိပါ။ Fintech, Agtech, IoT or TechForAll အစရှိတဲ့နယ်ပယ်တွေမှာ စီးပွားရေးထူထောင်လိုသူ မည်သူမဆို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါတယ်။
မေးခွန်း – Startup Challenge ကိုစိတ်ဝင်စားရင် ဘယ်သူကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါသလဲ?
အဖြေ – ဖန်တီးရာ Entrepreneurship Program Team 09 966 313 504 သို့မဟုတ် startupchallenge@phandeeyar.org ကိုဆက်သွယ်ပြီးဖြစ်ဖြစ် မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
မေးခွန်း – Application တင်ရင် Startup Challenge ကို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပြီလား?
အဖြေ – Application တင်ပြီးလျင် Startup Challenge ကို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရဖို့ မသေချာသေးပါ။ ဖန်းတီးရာကနေ မေလအတွင်း ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ရသူများကို ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားသွားမှာပါ။
မေးခွန်း – ပြိုင်ပွဲဝင်ရန် လျှောက်ထားဖို့ အချက်အလက်တွေကို မည်သို့သိရှိနိုင်မည်နည်း။
အဖြေ – Phandeeyar ကကျင်းပတဲ့ Startup Challenge Info Hour သို့လာရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ၂၇ ရက်နေ့၊ ဧပြီလ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ကြာသာပတေးနေ့ ညနေ (၆) နာရီ မှာကျင်းပမှာပါ။ ဒီလင့်မှာ စာရင်းပေးသွင်းနို်င်ပါတယ်။ [http://bit.ly/2oEUl2Y]
မေးခွန်း – ကျွန်တော့်မှာ စီးပွားရေးနဲ့ပက်သက်တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ မရှိသေးပါဘူး ။ အဲလိုဆိုရင်ကော ပါဝင်လို့ရလား ?
အဖြေ – ဟုတ် ၊ ရပါတယ် ။ စီးပွားရေး idea ရှိပြီးပြီ ၊ ဒါမှမဟုတ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ အသုံးဝင်တဲ့ Marketing , Finance , Business Development စတဲ့ အတွေ့အကြုံရှိလည်း ဝင်ရောက်လို့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း Business Model Canvas ကို အသုံးပြုပြီး စီးပွားရေးကို ဘယ်လိုစတင်မလဲဆိုတာကို သင်ကြားပေးမှာပါ။ Business Model Canvas ကို တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာလည်း ထွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုနေကြပါတယ်။
မေးခွန်း – Startup Challenge ရဲ့ Tracks တွေကိုပြောပြပေးပါ?
Fintech – Fintech ဆိုသည်မှာ ဘဏ္ဍာရေး ကဏ္ဍနှင့် စပ်စပ်သော နည်းပညာ ကိုဆိုလိုသည်။ နည်းပညာအား သုံးသူ၍ ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍတွင် လူသားများပိုမိုပါဝင်နိုင်စေရန်လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း။ ဥပမာအားဖြင့် – မိုဘိုင်း(လ်)ဖုန်း သုံး၍ ငွေပေးချေမှုနိုင်သည့် ပလက်ဖောင်း။
Agtech – Agtech ဆိုသည်မှာ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး ကဏ္ဍအား ပိုမိုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် နည်းပညာအား အသုံးပြုခြင်းကို ရည်ရွယ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး ကဏ္ဍအတွက် သတင်းအချက် အလက် နှင့် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများကို ထောက်ပံ့ပေးသည့် မိုဘိုင်း(လ်) application များ။ (ကြည့်ရန် – Green-way Agri Mobile App)
iOT (Internet of things) iOT ဆိုသည်မှာ အင်တာနက်မှတဆင့် ထိန်းချူပ်နိုင်သော အမိန့်ပေးနိုင်သည့် စက်ပစ္စည်းများကိုဆိုလိုသည်။ ဥပမာအားဖြင့် မိုဘိုင်း(လ်)ဖုန်းဖြင့် စေခိုင်းနိုင်သည့် စက်ရုပ် သန့်ရှင်းရေးသမား http://bit.ly/2nOEz8z တွင်ကြည့်ပါ။
Tech for all – ဆိုသည်မှာ နည်းပညာထုတ်ကုန်များသည် လူသားအားလုံးအား အကျိုးပြုသည်ဟူသော အတွေးအခေါ်မှလာသည်။ အထိအတွေ့ အရောက်ပေါက်နည်းများ ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျသူအားလုံးအတွက် ဦးတည်သော နည်းပညာဖြစ်သည်။ ဥပမာ အားဖြင့် UBER application ဖြစ်သည်။
မေးခွန်း – Startup Challenge မှာ ဝင်ရောက်ဖို့ Track တစ်ခုကို ရွေးချယ်ရမှာပါလား?
အဖြေ – ဟုတ်ကဲ့၊ Track တစ်ခုကို ရွေးချယ်မှ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ရရှိမှာပါ။
မေးခွန်း – အသင်းတစ်ခုမှာ ဘယ်နှယောက်ပါဝင်လို့ရလဲ ?
အဖြေ – အနည်းဆုံး ၂ ယောက်ကနေ စတင်ပြီး ပါဝင်လို့ရပါပြီ ။ အများဆုံး မသတ်မှတ်ထားပေမယ့် ၅ ယောက်ထပ်မကျော်ဖို့ကတော့ ကျွန်တော်တို့ recommend လုပ်ပါတယ်။
မေးခွန်း – ပွဲမစခင်ကထည်းက အသင်းဖွဲ့ထားဖို့လိုလား ?
အဖြေ – မလိုပါဘူး ။ တစ်ကယ်လို့ မိတ်ဆွေ အသင်းမဖွဲ့ရသေးဘူးဆိုလည်း ကျွန်တော်တို့ အသင်းဖွဲ့နိုင်အောင် စီစဉ်ပေးမှာပါ။
မေးခွန်း – ကျွန်တော် အလုပ်လည်းသွားရပါတယ် အချိန်ပြည့်မလာနိုင်ပါဘူး။ အဆင်ပြေမလား ?
အဖြေ – အဆင်ပြေပါတယ် ။ စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းရှင်တွေ တော်တော်များများလည်း အချိန်ပြည့် အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ စီးပွားရေးကို စကြတာများပါတယ်။ အခုပြိုင်ပွဲက တစ်ပတ်တာ ပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက် အားတဲ့အချိန်မှာ လာရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ပါတယ် ။ ဒါမှမဟုတ်လည်း ညနေပိုင်း အားတဲ့အချိန် မှာလည်း လာလို့ရပါတယ်။
မေးခွန်း – ကုမ္ပဏီ (သို့) Startup တွေကော ဝင်ပြိုင်လို့ရလား?
အဖြေ – ဟုတ် ၊ ရပါတယ် ။ ကုမ္ပဏီ (အထူးသဖြင့်) Startup တွေကို ပါဝင်ဖို့ အထူးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
မေးခွန်း – Business idea တွေက နည်းပညာ(Technology) နဲ့ပက်သက်တဲ့ business idea တွေရှိမှပဲ ပြိုင်လို့ရတာလား ? ဥပမာ – Application , e-commerce ?
အဖြေ – မဟုတ်ပါဘူး ။ မည်သည့် business idea နဲ့မဆို ပါဝင်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဖက်ကလည်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ နည်းပညာကို အသုံးပြုဖို့ အားပေးပါတယ်ခင်ဗျ။
မေးခွန်း – Business competition ဒါမှမဟုတ် Hackathon တွေမှာ တစ်ခါမှ မပြိုင်ခဲ့ဖူးပါဘူး ၊ အဆင်ပြေပါ့မလား ?
အဖြေ – ပြေပါတယ် ။ ကျတော်တို့ အကုန်ရှင်းပြပါ့မယ်။
မေးခွန်း – ရန်ကုန်မှာနေတဲ့လူမဟုတ်လည်း ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်လို့ရလား?
အဖြေ – ရပါတယ် ။ လိုအပ်တဲ့ သတင်း အချက်အလက်တွေကို ကျွန်တော်တို့ online ကနေ ကြေညာသွားမှာပါ ။ ဒါပေမယ့် မေလ ၂၈ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့မှာ မိတ်ဆွေတို့ အဖွဲ့က တစ်ယောက်တော့ ရန်ကုန်ကို လာပြီး အကဲဖြတ်ဒိုင်တွေကို လာရောက် တင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မေးခွန်း – Startup Challenge ကို ဖန်တီးရာမှာကော လာလုပ်လို့ရလား ?
အဖြေ – ရပါတယ် ။ ဖန်တီးရာက တစ်ပတ်လုံး ( ၂၀ ကနေ ၂၈ ရက်နေ့ထိ ဖွင့်ထားမှာပါ)။ လာရောက်လို့ရပါတယ်။
မေးခွန်း – ဖန်တီးရာမှာ လာလုပ်မှရမှာလား ?
အဖြေ – မဟုတ်ပါဘူး ။ မိမိတို့ အဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာ လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဖန်တီးရာမှာဆိုရင်တော့ အင်တာနက် ၊ မုန့်တွေ ၊ အအေး စတာတွေတော့ ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
မေးခွန်း – တစ်ယောက်ထည်း ပြိုင်လို့ရလား?
အဖြေ – မရပါဘူး ။ တစ်ယောက်ထပ် ပိုရပါမယ် ။ အသင်း တစ်သင်း မှာ အနည်းဆုံး ၂ ယောက်ကနေ စတင်ပြီး ပါဝင်လို့ရပါတယ်လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ် ။ တစ်ကယ်လို့ အသင်းမရှိသေးဘူးဆိုရင်လည်း စိတ်မပူပါနဲ့ စနေနေ့မှာ ဖန်တီးရာကို လာခဲ့လိုက်ပါ ။ ကျတော်တို့က အသင်းဖွဲ့နိုင်အောင် စီစဉ်ပေးမှာပါ။